Kun Konfaransii ummatni Tigiraay dhaaba isaanii TPLF waliin godhatani – Kichuu
Kun Konfaransii ummatni Tigiraay dhaaba isaanii TPLF waliin godhatani. Yaadni asirratti ka’e yaada miidiyaatti gadhiifame (public) waan taheef iccitii wayiituu hin qabu.
Haa tahu malee konfaransii kana irratti wanni dubbatame cuunfaatti akka armaan gadiiti. Garuu wanni asirraa hubatamu tokko ni jira. “Ummata Tigraay jechuun TPLF, TPLF jechuun ummata Tigiraay” kan jedhamu sun as keessatti hin mul’atu.
Kaayyoon konfaransichaa akkamitti dadhabbina hamaa keessatti kufnekeessaa baana kana jedhu. Dr. Dabratsiyoon yeroo dura dubbatu akka TPLF jaaramuu irraa eegalee rakkoo meeqaatama mudataa turee fi hundumaa injifannoon keessa bahe ibse. Du’e yeroo jedhamu biyyee arraabee ka’ee osoo qabsaayuu har’a gahe jedhe. Ammas rakkoo guddaa keessa jiraannuyyuu bakka kufnee ni kaana abdii jedhu kenne.
Hirmaattonni gaaffii fi yaada dhiheessaniin irra hedduun isaanii hogganoota TPLF jabeessanii qeeqan. Waa lamaan qeeqan. Tokko, gaafatama keessan hin bahanne, nu waliin walitti dhihaattanii hin hojjenne, yaada ummata irraa hin fudhatanu kan jedhu. Qeeqni lammaffaan, hannaa fi saamicha isni gootantu maqaa Tigiree balleessaa jira kan jedhu. Maqaa keessaniin lammiin Tigiree jibbamaa jira jedhan. Warra sababa walitti bu’iinsa dangaatiin qehee fi qabeenya irraa buqqa’e ifatti hin gargaarre jechuunis namni tokko qeeqanii jiru.
Dr. Dabratsiyoon qeeqa waan hannaa fi saamichaa irratti dhihaate sana fudhateera. Hattoonni fi saamtonni sun Tigiraay misoomsuuf qooda gumaachan akka hin qabnee fi omisha isaanii naannoolee biroo akka Amaaraa fi Oromiyaa keessatti galii itti argataa jiran jechuun yaada ka’e jajjabeesse. Garuu dadhabbina keenya dabre nutti tarrisuu osoo hin taane furmaata barbaadaaf isin waamne jedheen. Rakkoo amma keessa jirru keessaa akka itti baanu nutti himaa jechuun kadhate.
Viidiyoon marii kanaa baay’ee cicciramee kan gulaalame fakkaata. Keessattuu haasaan Dr. Dabratsiyoon yeroo baay’ee gulaalameera. Haasaa isaa keessaa wanti keessaa baasuun dirqama tahe hedduutu jira jechuu mul’isa. Kun marii iccitii miti waan taheef waan ummata biroo birattis yoo dhagahame rakkoo hin finne gulaalanii dhiheessan.
''Maaltu Deemaa Jiraa? Biyyaa koo oromiyaa /Ethiopia Keessatti!